Åda ငှက်ကြည့်ခြင်း | Hultsfred ကိုသွားပါ။
Heron, whooper Swan သို့မဟုတ် tern?
လူတိုင်းငှက်များကိုကြည့်နိုင်သည်! သင်၏ခြေထောက်များ၊ နေ့လည်စာအိတ်တစ်လုံးနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကင်းထောက်စိတ်များကိုကောင်းစွာကျန်းမာစွာထားနိုင်ပြီးMörlunda၏တောင်ဘက်ရှိ Ryningen ငှက်အခန်းသို့သွားပါ။ ၎င်းသည်ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်အကြီးဆုံးစိုစွတ်သောမြေတစ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ကားရပ်နားရန်နေရာ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များပါရှိသည်။ နောက်ထပ်ကြည့်ချင်လား Hulingen ၏ငှက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးandရိယာနှင့်Mörlundaslättenတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြှို့နယ်ရှိအခြားကောင်းမွန်သောtwoရိယာနှစ်ခုဖြစ်သည်။
Mörlundaslättenသည်မြောက်ဘက်ရှိGårdvedaမှတောင်ဘက်ရှိ Tigerstad အထိကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းသည်စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေအကျယ်အဝန်းရှိသောရှုခင်းသာဖြစ်သည်။ Emånနှင့်Gårdvedaåntheရိယာမှတဆင့်စီးဆင်း။ ငါ de
Hulingen သည် ချစ်စရာကောင်းသော ငှက်အိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆောင်းဦးနှင့် နွေဦးတွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သောငှက်များအတွက် အကောင်းဆုံးအနားယူရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hulingen တွင် ကျယ်ပြန့်သော သစ်ရွက်ကျူဧရိယာများပါရှိသော ထူးခြားသောလွင်ပြင်ရေကန်ပုံစံရှိပြီး အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့တွင်ရှိသည်။